I-pedal compound okuzenzakalelayo okungenalutho okuhlanganisiwe i-eyewash, elula futhi elula, ingaqeda ngokuzenzakalela amanzi angaphakathi asalayo we-eyewash, okonga futhi asebenzayo.
Umhlangano wamehlo usebenzisa izingxenye ezintathu ezingama-304 insimbi engagqwali + i-ABS yellow epoxy resin, insimbi engenamthungo yensimbi isikhunta ekubunjweni ukubumbana okuhlanganisiwe, indawo ebushelelezi, ukumelana nengcindezi enamandla, impilo yenkonzo ende, iso esigabeni semakethe esiyisisekelo yizinhlangano eziyishumi zokushisela, i-weld, indawo emaholoholo, ukusebenza ngaphansi kwengcindezi akuyona ingcindezi, okulula ukuqhekeka kokuvuza kwepayipi, impilo yenkonzo emfushane.
Okuyisisekelo: I-BH30-5012 enkulu ye-pedal compound eyinsimbi yeso
ububanzi obungu-260mm, ubukhulu obungu-0.6mm, ishawa yokujikeleza engama-360 degree, ayikho i-Angle efile, indawo yonke yokumboza umzimba inkulu, ihlangabezana futhi yeqe izinga elijwayelekile lase-United States (okudingwa ngo-1524mm ukusuka ekuphakameni komhlaba, ububanzi bokufafaza ukufinyelela ububanzi obungu-508mm) , ukugeleza kweshawa kuze kufike ku-180L / iminithi, kuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zeleveli yaseMelika yebanga lokuwasha iwashi.
Kokubili okungenhla nangaphansi kuthatha i-valve yebhola lezingcezu ezimbili, ephakeme kuneyunithi eyodwa yebhola, ukuvula okukhulu, kungahlangabezana nezinga laseMelika lokugeleza kokuwashwa kwamehlo. (Ukugeleza kokugeleza ≥ 75.7L / iminithi, ukugeleza kokugeza iso ≥ 11.4L / iminithi, ukugeleza okusebenzayo nokusheshayo)
Idivayisi yokuguquguquka eguquguqukayo, ingalungisa ukugeleza kwamanzi nganoma yisiphi isikhathi, igweme ngempumelelo ukungazinzi kwengcindezi yamanzi okubangelwa ukuphakama okungahambelani nokugeleza akukwazi ukuhlangabezana nezidingo zokuwasha nezinye izinkinga. Sicela uqinisekise ukuthi ingcindezi yamanzi esizeni ifinyelela ku-0.25MPa.
Imodeli eyisisekelo: BH30-5012
BH30-5012T: Umlomo owodwa wokuwasha iso
I-BH30-5012A: I-pedal encane
I-BH32-5012: I-washer enkulu ye-pedal eye (ngaphandle kwekhanda leshawa)
I-BH32-5012A: I-washer yeso elincane elime mpo (ngaphandle kwekhanda leshawa)
Langaphambilini I-Antifreeze isher washer (ingcwatshwe)
Olandelayo: Iwashi eliqondile